Homeसमाचारबुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड , हे’र्नुहोस् भिडियो
February 12, 2021 admin समाचार 6685
काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कानपुरका सिंह बहादुर लामाले पछिल्लो ६ वर्षदेखि बुद्ध चित्त मा’लाको खेती गर्दै आएका छन् । लामाका अ’नुसार उनले एउटै बोटबाट एक करोड रुपैयाँ’सम्मको माला बिक्री गरे । चीनबाट आउने ग्राहक वा व्यापारीले बुद्ध चित्तका दाना साइ’ज नापेर खरिद गर्छन् ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले जप र मा’लाका रुपमा प्रयोग गर्ने बुद्ध चित्तको माला निकै महं’गोमा बिक्री हुन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थासँग जोडिएको माला किन्न चीन लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट समेत ग्राहकहरु काभ्रे पुग्छन् । यही खेती गर्दै आएका कृषक ला’माले ठूलो भन्दा पनि साना दाना महंगो’मा बिक्री हुन्छ ।
बुद्ध चित्तको एक सय आठ दा’नाको माला बनाइन्छ । यस्तो माला कम्तिमा १३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने अनुभव लामाले हामीसँग साझा गरे । बुद्ध चित्त’को खेती कसरी गर्ने ? यो कस्तो भूगोलमा हुन्छ ? लगानी, घाटा, नाफा, बजार कस्तो छ ? लगायतका जि’ज्ञासा मेट्न कृषककै गाउँ’ठाउँमा पुगेर तयार पारिएको भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरा हेर्नुहोला ।
कविराज जसले रक्सी खा’एर सिध्याए पाँच करोड, अहिले रक्सी छाड्ने’लाई दिन्छन् १० हजार पुरस्कार (भिडियो) काभ्रे । जीवन सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! काभ्रे पिपलचौरका कविराज श्रेष्ठको हकमा पनि त्यस्तै भयो । ठिकठाक चलि’रहेको थियो जीवन । श्रीमती वि’योगमा परेका उनी मदि’राका लागि जे पनि त्याग्न तयार भए । काठमाडौंको तिनकुनेदेखि काभ्रेको बनेपा र हेटौंडामा जोडेको करोडौं मूल्यको जग्गा जमीन उनले मदि’रामा सिध्याए ।
April 10, 2021 admin समाचार 5774
May 25, 2021 admin समाचार 5772
June 9, 2021 admin समाचार 4946